LES COLOMBES ASSOCIATION: MANOHANA NY KANDIDA ANDRY RAJOELINA
On déc 12, 2018 31 653
» Tsy maintsy atao izay hampandaniana an’i kandida laharana faha-13. Misy ny paikady manokana entina manao ny fampielezan-kevitra. Miainga avy aty ifotony ny hetsika rehetra mba izay tena resy lahatra no miasa », nivoitra izany tamin’ny fanazavana nomen’ny mpitarika ny fikambanana « LES COLOMBES ASSOCIATION », Ratoa Randrianarisoa Riana Raymonde, nandritra ny fampielezan-kevitra nataon’izy ireo, omaly. Nanomboka ny alahady lasa teo, nidina an-tsehatra ny fikambanana mampandany an’Atoa Andry Rajoelina.
Misy ny fitetezana tanana tao, Ivoanjo Tsarahonena, Ambohibary ao anatin’ny kaominina Anosiala. Nitohy teny Ambohibe sy Ampasika, kaominina Mahitsy izany.
Ny ampahany amin’ny ekipa kosa dia efa miasa any Itaosy sy eny Nanisana.
Hipaka hatrany Ampanotokana sy Andranovelona, distrika Ankazobe, ny fampielezan-kevitra anio.
Hanomboka koa ny any Vavatenina sy any Antalaha.
Marihina fa misafidy ny fitetezan-trano sy fandresen-dahatra momba ny Velirano sy ny tetikasa IEM ny fikambanana. Ankoatra ny fanentanana amin’ny finday, sy ny fanaparitahana hafatra amin’ny mailaka sy ny tambajotran-tserasera.
« Naleonay misafidy ny fifaneraserana mivantana amin’ny mponina sy ny mpanentana ato aminay mba hisian’ny vokatra azo tsapain-tanana. Efa misy rahateo ny ekipa manao ny fanentanana mahazatra avy amin’ny TGV sy MAPAR. », Hoy hatrany ity mpitarika fikambanana ity.
Marihina fa ny fikambanana « Les Colombes Association » na LCA dia niorona ara-dalana ny taona 2011. Anisan’ny mampiavaka azy, ny fanaovana asa soa amin’ny vehivavy sy ny ankizy sahirana, eny ambanivohitra.
FIFANDRAISAN-DAVITRA: TSY AFAKA MIASA INTSONY NY FINDAY TSY MISY IMEI MANOMBOKA NY JONA 2019
LES COLOMBES ASSOCIATION : MANAMAFY NY FANOHANANA NY KANDIDA MANANA VINA SY FOMBA FIJERY LAVITRA, ANDRY RAJOELINA